HomeWararka MaantaMesut Ozil: “Waan Jecelahay Eyda”
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Arsenal ee Mesut Ozil oo guushii u horreysay ee isreeb-reebka koobka Adduunka waddankiisa Germany u horseeday, ayaa waxa uu soo bandhigay wax ku cusub dunida, kaddib markii uu garoon la tegay Ey la sheegay inay saaxiibo yihiin oo lagu magacaabo Balbao.
Ozil ayaa bartiisa Instagram ku baahiyey sawirro iyo video ku saabsan wixii garoonka ku dhex maray eyga, kaas oo ahaa in ay kubadda wada ciyaareen.
Eyga oo labada lugood iyo madaxaba ku ciyaarayey kubadda ayaa si xarrago leh ugu soo celinayey kubadda marka uu Ozil u laago, waxaana qoraal uu raaciyey sawirrada uu bartiisa bulshada ku baahiyey uu ku sheegay in eygiisu uu yahay mid farsamo qurux badan leh oo ku fiican kubadda.
Ozil oo eygiisa hore loo odhan jiray Paul Pugba ayaa u bixiyey Balboa, waxaana uu ka hadlay sababta isagoo soo bandhigay inay saaxiibo yihiin.
“Waxaan haysaa Ey magaciisu yahay Balboa. Markii aan yaraa, waan ka baqan jiray Eyda, haddase waxaan rabaa inaan ka gudbo cabsidaas, waxaanan go’aansaday in aan sameeyo sida ugu wanaagsan ee ay taasi u dhici karto oo ah inaan Ey yeesho.” sidaas ayuu yidhi Ozil.
Waxa uu intaa ku daray Ozil in uu ka gudbay cabsidii hayn jirtay, haddana uu eyda jecel yahay, waxaanu yidhi: ”
“Hadda waan ka gudbay cabsidii, waan koray oo way dhamaatay. Hadda, waan jecelahay Eyda”
Ozil ayaa dhawr jeer oo hore lagu arkay dariiqyada magaalada london isagoo jiidanaya ey, taas oo keentay muran ah sida uu isaga ilaalin karo nijaastiisa isgoo ah nin Muslim ah.
Ozil iyo eygiisa oo kubbad wada ciyaaraya
Barcelona iyo Juventus oo Aasay Manchester City & Dortmund
AC Milan 0-0 Torino – Highlights & Goals